Nkwado nye enmụ Amaala Na-emebi Ọnọdụ Video Subway | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulEmegburu ya na Nkwado Obodo Citizen Video
emegburu n’ime nkwado vidiyo obodo metro cubbeli
Na Istanbul, ememme 29 October Republic nke ụgbọ oloko n'okporo ụzọ na uwe mkpuchi, a na-abụ abụ nke iri. Ezie na-ekerịta ihe oyiyi na-elekọta mmadụ mgbasa ozi, nke a kọwara dị ka c-akpaghasị tara site Islamists na dọtara mmeghachi omume.
Mgbe mkparịta ụka ndị a mere, Tezcan Tüysüz, onye otu ndị otu Menzil, kerịta oge ndị o kwuru n'okporo ụzọ ụgbọ oloko Istanbul na mgbasa ozi mmadụ. Na vidiyo ahụ, ndị mmadụ nọ n'ụzọ ụgbọ oloko agbagha. Oge enweghị ntutu, "a na-akwa ọchị na ụzọ ụgbọ oloko dịka onyinye nye nwanne m," ọ kesara.
Nkwado nye ndị ọrụ BURULAŞ wakpoo n'aka ndị ọrụ ahia
Jogney-Pants-Free na Metro 16 Ncheta Yıl
Kınalı Kuzular Ndụ na Metro
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị daa na egwu na ụzọ ụgbọ oloko
Ọganihu Na-enye Obi Ụtọ na Metro: 2020 meghere!
Mbupu mbu na Member Metro ARUS Bozankayasi
A na-asọpụrụ Ata na ụzọ ụgbọ oloko
Echefu ndị njem nkwarụ na Metro na-akwọ ụgbọala
Nkwupụta si n’ọdụ ụgbọ elu obodo Istanbul nke na-akụda mkpọda nke onye mgbapụ n’ọdụ ụgbọ oloko
Ibu ụzọ na ụzọ ụgbọ oloko Arnavutköy na Sultanbeyli
Egwu Ndị Ji ụgbọ oloko gbagoro na ọdụ ụgbọ oloko
Ọkọ akụkọ ihe mere eme na Besiktas